မိုးငွေ့နှင့်အတူ.....: Self Quarantine မှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ.....
Self Quarantine လို့သာပြောရတာ ကျွန်မအတွက်တော့ အပြည့်အဝ Self Quarantine မဟုတ်ဘူး....။ ကျွန်မတို့ရုံး ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကတည်းက ဝန်ထမ်းအကုန်နီးပါး အိမ်ကို ကွန်ပျူတာသယ်သူသယ် စာရင်းစာအုပ်တွေသယ်သူသယ် နယ်ပြန်သူပြန်နဲ့ အလုပ်ကို work from home လုပ်ကြတယ်....။ ကျွန်မကတော့ ရုံးနဲ့အိမ် ဟိုဖက်ဒီဖက် တာဝါမို့လို့ ဘာမှမသယ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ရုံးတက်ပါတယ်...။ ဘဏ်သွားစရာရှိ Mask တပ် လက်သန့်ဆေးဆောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ လုံခြုံမှုအပြည့်ယူပြီးထွက်တယ်...။ လက်တွေလည်း ဘာကိုင်ကိုင် ကိုင်ပြီးတိုင်းဆေးလွန်းလို့ လက်တွေခြောက်ကပ်ကွဲအက်ပြီး ယားလာတယ်.....။ အဲဒါနဲ့ hand cream ပါထပ်ကူရပြန်ရော ပစ္စည်းတစ်ခုကိုင်ပြီးတိုင်း (ကျွန်မက ပိုက်ဆံကိုင်ရတာများတယ်) လက်ဆေး တစ်ရှူးနဲ့သုတ် သုတ်ပြီးသားတစ်ရှုးအစိုနဲ့ အရက်ပျံဆွတ် ဖုန်းတွေ ဘောလ်ပင်တွေ ဂဏန်းတွက်စက် ကီးဘုတ် အကုန်သုတ်တော့တာ အဲဒါနဲ့လုံးချာလိုက်နေတာ တနေ့လုံး....။
အိမ်ပြန်ထမင်းစားရင်လည်း ဓါတ်လှေခါးစီးရင် ခလုတ်တွေကိုလက်နဲမထိအောင် ထီးနဲ့တို့တယ် အိမ်ရှေ့ရောက်လို့ ဘဲလ်တီးလဲ ထီးနဲ့တို့တယ် တံခါးကိုလုံးဝမကိုင်ဘူး အိမ်မှာရှိတဲ့အမေကို ဖွင့်ခိုင်းတယ်..။ အမေဖွင့်ပြီးလဲ သူ့ကိုလက်ဆေးခိုင်းရသေးတယ်...။ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ပြေးဆေး ပါလာတဲ့ထီး ပိုက်ဆံအိတ် ဖုန်းတွေကို အိမ်ဝင်ပေါက်မှာအဆင်သင့်ထားထားတဲ့ အရက်ပျံကို wet tissue နဲ့ဆွတ်ပြီးသုတ်တော့တာ...။ ဒါက နေ့လည်ပိုင်းထမင်းစားပြန်လုပ်တာ ညနေရုံးအပြန်ဆို အိမ်သော့ ရုံးသော့အကုန် ဆပ်ပြာအမြှုပ်များများနဲ့ဆေး အိမ်ရှေ့ဝရံတာက အကျနေဆိုတော့ အဲမှာ နေပူပြန်လှန်း ထီးကိုလည်း ဟိုတို့ဒီတို့လုပ်ထားတော့ ထီးကိုလည်း တို့ထားတဲ့နေရာတွေ အရက်ပျံပွတ် ဖွင့်ပြီးနေပူလှမ်း...ခါတိုင်း နေထိုးမှာစိုးလို ကိုယ်အိပ်တဲ့ အိပ်ခန်းဆို လိုက်ကာအပြည့်ပိတ်ထားတာ ခုဆို အကုန်ဖွင့် အိပ်ယာကို နေများများထိပါစေ အဲလိုလုပ်ရတာ...။ COVID 19 အမွှေစိန်နဲ့ စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ ပိုးရှိသူ ကူးစက်သယ်ဆောင်သူတွေကြောင့် လူက အမြဲသတိအနေထားကိုရှိနေတာ.....။
တစ်နေ့တစ်နေ့လဲ အစက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီဌာနက positive ဖြစ်သူ လူဦးရေကို ညသန်းခေါင်မှာကြေငြာတတ်တော့ ကျွန်မမှာ ညဖက်ဆို မအိပ်နိုင် အဲသတင်းလေးပို့ပေးမယ့်သူကိုမျှော်ရသေးတာကိုး ကိုယ်က ဖဘမသုံးတော့ update မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာ အခု အမေစုတောင် ဖဘအကောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီပြောတယ်...။ ကျွန်မကို ချစ်ခင်သူ စာဖတ်သူလဲဖြစ်တဲ့တစ်ယောက် အမြဲသတိတရနဲ့ သတင်းပေးနေတော့ ဖဘဖွင့်ဖို့အစီစဉ်ကိုမရှိဘူး...။ လူတွေဟာ အန္တရာယ်ဆိုး ကပ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံလာရင် စိတ်ရင်းမှန်တွေ အတ္တတွေ လောဘတွေ အလိုလိုပေါ်လာတတ်တယ်...။ ဒီလိုချိန်မှာ ကိုယ့်ကို သတိတရနဲ့ ခင်မင်လို့ သတိပေးစကားပြောသူတွေရှိသလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ခင်ရသူများကို ဘာသိရသိရ ဖုန်းဆက်ပြောဖြစ်တယ်...။ ကျွန်မ ဗိုင်ဘာမှာဆို Group တွေများတယ် Cousin Group အရင်ရုံးအဟောင်းကအဖွဲ့တွေ ရုံးသစ်အဖွဲ့တွေ ဒီအကြောင်းတွေပဲပြောနေကြတာ...။ ကိုယ်သိတာကြားတာ သူသိတာကြားတာဝေမျှတော့ အဆင်ပြေပါတယ်.... ဖဘမရှိလဲ....။ တချို့အမျိုးတွေကျတော့ ကိုယ်ကသတိပေးတာ သတင်းတစ်ခုရလို့ forward လုပ်တာတောင် အဖက်မလုပ်သူရှိတယ်...။ အဲလိုလူဆီကျတော့ ကျွန်မက နောက်ထပ်မပို့ဖြစ်တော့ဘူး....။ တစ်ဦးကမေတ္တာ တစ်ဦးကစေတနာဖြစ်နေရမယ့်အချိန်မှာလေ....။
Covid 19 ပြီးရင်တော့ လူလဲ ဝက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.....။ အားရှိအောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီး ထမင်းကိုလျှော့မစားရဲရင်းကလေ....။ ဒါပေမယ့် ရေချိုးခန်းအဝမှာထားတဲ့ ပေါင်ချိန်စက်ကတော့ အမြဲ ဒီဂဏန်းပဲပြနေတာဆိုတော့ ပေါင်ချိန်တော့မတိုးလာဘူး... ခြေထောက်ချိတ်ထိုင်ရင်တော့သိသာလာတယ် ပေါက်တွင်းအဆီတွေတက်နေတယ်ဆိုတာ...။ အိမ်မှာနေရင် ထိုင်ချည်းပဲမနေဖို့ you tube မှာတော့ မျိုးစုံပဲ ဘယ်သူတွေ တနေ့တနေ့ဘာတွေလုပ်လည်းဆိုတာ...။ မုန့်လုပ်စားသူ စာဖတ်သူ သီချင်းဆိုသူ ရုပ်ရှင်ကြည့်သူ live လွှင့်သူ စသဖြင့် အခု အဆိုတော် Ar T ဆို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြတယ်....။ ကျွန်မလည်း ပေါင်ဆီကျအောင်လို့ အောက်ကပုံအတိုင်း leg work out လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်နေပြီ....။ ခါတိုင်းက Yoga ကစားနေကျသူ မကစားဖြစ်တာကြာပြီ အပျင်းတစ်နေတာက ခပ်များများ....။ ရေကူးချင်တာ Covid က ကလိုရင်းကိုကြောက်တယ်လို့ပြောထားတာတွေ့တယ် ရေကူးကန်မှာ ကလိုရင်းတွေထည့်ထားတော့ အဆင်ပြေပေမယ့် ကျွန်မသွားကူးမယ့် တဖက်တာဝါက ရေကူးကန်က နိုင်ငံခြားသားတွေများတော့ မီးမီးကြောက်ကြောက်လေ...။ ခုချိန်မှာ ဘာမှမမြင်ရတာမို့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လူတွေကို အချင်းချင်းသံသယစိတ်ထားထားမှရမယ့်ကိန်းလေ...။ တစ်အိမ်ထဲမှာနေတာတောင် Social distance နေနေရတာမဟုတ်လား....။ ခုလိုချိန်မှာ couple တွေအတွက် အဆင်မပြေပေမယ့် Single is the best လို ဟစ်ကြွေးနေကျလူတွေအတွက်တော့ အေးဆေးပေါ့...။
အိမ်မှာ စားစရာတွေလုပ်စားတာတော့အများကြီးပဲ ကော်ပြန့်ကြော်စား ငှက်ပျောသီးကိတ်လုပ် ရှမ်းထမင်းချဉ်လုပ် သူငယ်ချင်းလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Waffle စက်လေးနဲ့ Waffle ကို ထိုင်းစတိုင်လ် အုန်းသီးဆံဖတ်တွေထည့်ပြီးလုပ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ယိုးဒယားအုန်းနို့မုန့်ဟင်းခါး.. ငါးပိရည်ထမင်းသုပ်နဲ့ ကြက်ကြော် စသဖြင့်ပေါ့ ပုံတွေပြရင် သရေယိုကုန်မှာစိုးရတယ်...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကပ်ကြီး အမြန်ဆုံးပပျောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရုံကလွဲပြီး မတတ်နိုင်တော့ပြီ....။ အော် ဒါနဲ့ ဘာလို့မတတ်နိုင်ရမှာလည်း အိမ်မှာနေ ဘယ်မှလျှောက်မသွားဘဲ လက်ခဏခဏဆေးပေး အဲဒါလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ရာရောက်ပါတယ်....။ အားလုံးကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့.....။
Posted by Cameron at 12:10
Take good care all my love...................
"Don't beamaskhole, wearamask...."
My Favorite Post.....
Something in the rain......
မိုးတွေသည်းတဲ့ နေ့ခင်းတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဆီကို မက်ဆေ့တစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်....။ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ကိုယ်သူ့ကို သတိရလို့ သူနဲ့စတွေ့တုန်းက ဆက်တိုက်န...
"စိတ်ထားတွေပြောင်းပြီး ကျောင်းတက်ကြ "
မူလစာမ်က္ႏွာ - Dhammaransi.com
တကယ်တမ်း ဒီစာအုပ်က ဆရာမင်းလူကွယ်လွန်ပြီး ဆရာ့အတွက် စာပေလောကက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း တူ တူမများက အမှတ်တရတွေရေးထားတဲ...
"အရဟံရဲ့ပထမအဓိပ္ပါယ်" အ+ရဟ။ ရဟ ဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ၊ အ ဆိုတာ မရှိဘူး။ အ+ရဟ ဆိုတာ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပင် မကောင်းမှုကို မလုပ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။ ...
နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့သည် မေတ္တာ...
ဒီထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲလေး ကြည့်ဖူးကြပြီးပြီထင်ပါတယ်....။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တီဗီ channel တစ်ခုကလွှင့်ပြီးသွားပြီ...။ ကျွန်မက tube ကနေပြန်ကြည...
ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိတယ် ဝေဒနာရှိတော့ နာရတယ်....လူသာနာပါစေ စိတ်တော့မနာစေနဲ့တဲ့ ဟိုနေ့က ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်တော့ တိုက်အုပ်ဆရာတော်က မိန့်သွားခဲ့တာ....
Stay Home မှာစားဖြစ်တာလေးတွေ.....
သခွားသီးထောင်း ကောက်ညှင်းပေါင်း ပလာတူးငါးကြော် ဝက်သားပေါင်း ဆီတိုဖူး နဲ့ ဒူးရင်းသီး ချဉ်ပေါင်နဲ့မျှစ်ကြော်ထားလို့ ထမင်းနဲ့နယ် ဆိုင်မှ...
နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်...
ဘဝမှာ နေဝင်ချိန်အလှ Sunset ကို ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမျိုးမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ မတွေးထားခဲ့ဖူးဘူး...။ များသောအားဖြင့် Sunset...
ဒီနှစ်ကျွန်မအတွက် နောက်ထပ်မိုးရာသီ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ရွှေမှုန်နဲ့ရွှေထူးတို့မောင်နှံနှစ်ယောက် ဆိုထားတဲ့ ''မိုးစက်များကပြောသော...
ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၃.၇.၂၀၂၀) ကိုသားကြီးကွယ်လွန်ပြီး ၁၃နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ ဦးကျော်(ဦးဇင်းကိတ္ထိသာရ)ဟာ အသက်(၇၃)နှစ် ဝါတော်(၁၂)ဝါမှာ ပျံလွန်တော်မူသွ...
Mask တပ်ပါ လက်ဆေးပါ လိုအပ်မှအပြင်ထွက်ပါနော်
Are You An Avocadian?
A Song That wasaHit Before Your Mother was Born
အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္ (Behide Every Violent Act)
ကြိုလည်းကြိုဆိုပါတယ် .. ပြင်ဆင်ချိန်လေးတော့ပေးပါ
simply coral's kitchen (117)
simply coral's kitchen (baking) (18)
simply coral's kitchen (coffee) (8)
simply coral's kitchen(အခ်ိဳပြဲမ်ား) (14)
ပံုရိပ္မ်ား အခင္းအက်င္း (44)
My Favorite Photos....(3)